Inguqulo 0.7.5 – Usuku olude ++
June 22, 2011 by okunikezwayo 23 Amazwana
Ukwesekwa 5 ngaphezulu izilimi Indic
Ngolunye usuku ehlobo emva uqalile ngokusemthethweni kule Nenkabazwe, siyaziqhenya ukwethula version 0.7.5 of plugin yethu. Le nguqulo unezela ukuxhasa izilimi ezintsha ezamiswa njengoba asekelwa namuhla by Google Translate – Bengali, Gujarati, Kannada, Tamil and Telugu.
Ngaphambi egijimela wengeze lezo zilimi ukuba blog yakho, sicela sikhumbule ukuthi lezo zilimi zisebenzisa i proxy Ajax ukuze isebenze kahle, okusho ukuthi ukudala umthwalo on server yakho phezu kuhlangana kwabo kokuqala inguqulo string entsha (ukuyiphoqa it ukulanda inguqulo kusuka Google). Ngakho isinqumo ngesakho, kepha uye aziswe…
Okunye okubalulekile ukuthi le nguqulo unezela ukhetho hhayi ukubhala ngaphezulu indawo ezungezile iphutha nge phutha ngolimi Transposh sika, lokhu kuziphatha (elisha 0.7.4) bavumela abasebenzisi mu ukuba babe amakhasi admin ngolimi lwabo, kodwa ngakolunye uhlangothi ukumcasula abasebenzisi ukuthi wayefuna ukulawula isayithi ngolimi ezahlukene kuka oluzenzakalelayo yabo, ngakho manje lena okulungisekayo.
Siphinde zithuthukise UI translation, izinkinobho olandelayo bese wangaphambilini manje londoloza izinguquko kwenziwe, futhi ingxoxo ngeke kabusha igxile phezu ngokuchofoza izinkinobho lezi.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: 0.7, google ukuhumusha, minor, izilimi ezingaphezu, ukukhululwa, UI, plugin wordpress
Inguqulo 0.7.0 – Ikusasa lokuhumusha esibonakalayo!
January 12, 2011 by okunikezwayo 3 Amazwana
Olandelayo ezinkulu version Ukukhululwa Transposh ulapha, futhi ukugubha senzakalo sidale ividiyo iDemo (mayelana 11 imizuzu) . Ukwethula izici ezintsha ezitholakala version entsha. Nina kuka wamukela ukubuka ividiyo bese baphakamise lona ezayo umklomelo Academy umklomelo for yokuhumusha plugin update movie.
Into yokuqala uzophawula kule nguqulo ezintsha yilona update enkulu esibonakalayo lomsebenzisi, siye wanezela ezimbalwa izici eceliwe kakhulu kuya isikhombikubona ezifana elilandelayo / buttons owedlule, imvume izinguqulo okuzenzakalelayo futhi lokuthola amagama abizwa elihunyushwe. Esinye isici ezithakazelisayo ukuthi thina wanezela yikhono sokuba umhumushi ukuze abone nkulumo yoqobo ngolimi ezahlukene uma kakade lihunyushwe ukuba uthe ngolimi ngesandla, ngakho bacabanga unayo blog lesiHebheru elihunyushwe kulo ku-English, umhumushi angase akwazi ukuhumusha site lakho kusuka English kwesinye limi, okungase kube lula ngaye. Ngithanda ukubonga NoHanani ngokuba kwasekuqaleni kokucela lesi sici. Kungenzeka futhi manje ukuze ususe izinguqulo ezivela ingxoxo umlando, okuyinto a isinyathelo lokusebenza lokulawula eqinile on quality translation.
Le interface ubuye sleeker, nge UI nicer ukuthi ubuye abe localizable futhi themable, ungabeka isihloko in the izilungiselelo iwijethi, kanye nendawo enhle ukuze zokushintsha kanjani uyobheka kuyinto themeroller. Uma ufuna ukusisiza ekuhumusheni esibonakalayo ulimi lwakho futhi awuthole credits ngoba, sicela usazise ngokusebenzisa contact us inketho ngenhla.
Umjaho izingalo namanje kuyaqhubeka, kanti Transposh yiyona plugin yokuqala (esikwaziyo) ukusekela (ukusekela ngempela, support ukusebenza) ngoba 60 izilimi ngokungeza ukwesekwa Esperanto besebenzisa Apertium injini, ngokuba manje kuphela usebenzela blogs isiNgisi Spanish, kodwa bayavuma izilimi ezingaphezu phezu funa.
Abaningi fixed more afakiwe, updates database, the eside bafuna emva keys meta translation, nokuningi – ukuvala ~ 15 amathikithi on yethu Trac.
Okokugcina – the credits for abahumushi kulesi ukukhululwa yana: Amir ukutolika yakhe ukuba IsiHebheru Ignacio for the ukuhumusha Spanish, ngiyabonga guys!
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: 0.7, apertium ukuhumusha, minor, izilimi ezingaphezu, ukukhululwa, themeroller, UI, ividiyo